यस्ता छन् विश्वका चर्चित यौन संग्रहालय, नेपालका सम्पदा त टुँडालमै कुहिए !
१० अषाढ २०७४
यौन क्रियकलापबारे खुलेर सार्वजनिक कुरा गर्नुलाई हिन्दूहरू निको ठान्दैनन् । अझ नेपाली समाज त यौनका सम्बन्धमा निक्कै साँघुरो छ । यद्यपि पछिल्ला केही वर्षयता यौनबारे नेपाली घररसमाज फरक बन्ने प्रयास गर्दैछन् । एउटै घरभित्र महिला र पुरुषको यौन समस्याबारे एकअर्कालाई भन्न हिचकिचाउने, सञ्चारमाध्यममा प्रसारणरप्रकासन हुने यौनसम्बन्धि सामाग्रीबारे घरमा कुरै नगर्ने परिस्थिति अहिले केही फेरिएको छ । त्यसो त यौनबारे नेपाली समाज अझै खुल्न नसके पनि…विस्तृत समाचार »
​मुटुको अपरेशन गरेका विरामी अस्पतालको बेडमै नाच्न थालेपछि....(भिडियोसहित)
अस्पतालको माहोल त्यसै पनि बोझिलो हुन्छ । सबैभन्दा खराब अवस्था विरामीकै हुन्छ । परिवारजनको अनुहार पनि मलिन हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा झनै ठुलै अपरेशन गर्नु छ भने त यो सिरियस अवस्थामा रमाइलो गर्ने कुरा कस्ले सोच्न सक्ला ? यही बोझिलो माहोल त्यतिबेला बदलियो जतिबेला अमेरिकाको मेरील्याण्डमा १५ वर्षका एक मुटुरोगी युवक अस्पतालको बेडमै डान्स गर्न थाले । १५ वर्षीय अमारी हल मुटुको अपरेशनपछि बेड…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 23 24 25 26 27 Older